M6-Measurement warshad camera iyo soo saarayaasha | Roobab
U dooro kamarad ku habboon oo xirfad leh diyaaradahaaga aan duuliyaha lahayn
1:Ku rakiban UAV：M200 V2、M210 V2、M210 RTK V2、M300RTK, iyo mid kasta oo kale oo badan oo roter ah / baal go'an / VTOL drones
2: Isdhexgalka sare ee DJI UAVs, fududahay in la shaqeeyo
3:In ay taageerto tignoolajiyada TimeSync si loo hagaajiyo saxnaanta xogta meelaynta RTK
4: Yar iyo iftiin, kordhiya nolosha batteriga UAV
5:Waqtiga-dhexe ee ugu yar ≤0.8s
6:kaarka xusuusta ee la bedeli karo
7: muraayad la bedeli karo, oo ku haboon codsiyada kala duwan
8: Hel jawaab celinta heerka shaqada ee lenska wakhtiga dhabta ah, iska ilaali duulimaadka aan sax ahayn
9:Daar oo dami diyaaradda si isku mid ah, ama gacanta'
10:Si toos ah u akhri xogta GPS-ka ee diyaaradaha aan duuliyaha lahayn
Cabbirrada-kuma jiraan daboolka muraayadaha (mm)
Wadarta xallinta (MP)
Dhererka fog (mm)
35/40/50/56 (waa la bedeli karaa)
Inta u dhaxaysa soo-gaadhista ugu yar
Habka soo-gaadhista kamarada
Kiciya, taxane, dhexda u-gaadhista
gelinta awoodda (V)
Qaabka korontada kamarada
Pdayn lagu leeyahay
Max. isticmaalka korontada (W)
15-80 (aan shubin)
Kiis guul ah oo sawir-qaadis ah
——Isticmaal qaabka 3D si aad u samayso sahan cadastral meelaha dhaadheer
Ka dib dhowr sano oo horumarineed, hadda Shiinaha, sawir-qaadista ayaa si weyn loogu isticmaalay mashaariicda sahaminta cadastral miyiga. Si kastaba ha ahaatee, sababtoo ah xaddidaadda qalabka xaaladaha farsamada , sawir-qaadista qallafsan ayaa weli daciif ah cabbirka cadastral ee goobaha waaweyn ee dhibcaha, inta badan sababtoo ah dhererka focal iyo qaabka sawirka muraayadda kamaradku ma aha ilaa heerka. Sannado badan oo khibrad mashruuc ah ka dib, waxaan ogaanay in saxnaanta khariidadda ay tahay in ay ahaato gudaha 5 cm, ka dibna GSD waa in uu ahaadaa 2 cm, qaabka 3D waa inuu ahaadaa mid aad u wanaagsan, cidhifyada dhismuhu waa inay noqdaan kuwo toosan oo cad.
Guud ahaan, dhererka fogaanta kamarada ee loo isticmaalo mashaariicda cabbiraadda cadastral-ka miyiga waa 25mm xagga toosan iyo 35mm oblique ah. Si loo gaaro saxnaanta 1:500, GSD waa in uu ahaadaa 2 sentimitir. Iyo in la hubiyo in joogitaanka duulimaadka diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ay guud ahaan u dhexeeyaan 70m-100m. Marka loo eego joogitaanka duulimaadkan, ma jirto hab lagu dhamaystiro ururinta xogta dhismayaasha 100m ee ka sarreeya. Xitaa haddii aad sameyso duulimaad si kastaba , ma dammaanad qaadi karto isku-dhafka saqafka, taasoo keentay tayada liidata ee qaabka. Iyo sababta oo ah dhererka dagaalku aad buu u hooseeyaa, aad bay khatar ugu tahay UAV.
Si loo xalliyo dhibaatadan, bishii Maajo 2019, waxaanu samaynay imtixaanka xaqiijinta saxda ah ee Sawir-qaadista Oblique ee dhismayaasha dhaadheer ee magaalooyinka. Ujeedada tijaabadani waa in la xaqiijiyo in saxnaanta khariidaynta u dambaysa ee qaabka 3D ee ay dhistay RIY-DG4pros kamarad oblique ah ay buuxin karto shuruudaha 5 cm RMSE.
2. Habka tijaabada
Imtixaankan, waxaanu ku dooranaynaa DJI M600PRO, oo ku qalabaysan kamarad shan lens ah oo roob-qabta RIY-DG4pros ah.
Aagga sahanka iyo qorshaynta goobaha xakamaynta
Si looga jawaabo dhibaatooyinka kor ku xusan, iyo in la kordhiyo dhibka, waxaan si gaar ah u dooranay laba unug oo celcelis ahaan dhererka dhismuhu yahay 100 mitir si loo tijaabiyo.
Goobaha xakamaynta waxaa loo dejiyay si waafaqsan khariidada GOOGLE, deegaanka ku hareeraysana waa inuu ahaadaa mid furan oo aan la daboolin intii suurtogal ah. Fogaanta u dhaxaysa dhibcaha waxay u dhaxaysaa 150-200M.
Barta kantaroolku waa 80 * 80 labajibbaaran, oo loo qaybiyay casaan iyo jaalle sida waafaqsan jaantuska, si loo hubiyo in xarunta barta si cad loo aqoonsan karo marka milicsiga aad u xoogan yahay ama iftiinku ku filnayn, si loo hagaajiyo saxnaanta.
Qorshaynta Jidka UAV
Si loo hubiyo badbaadada hawlgalka, waxaanu ilaalinay joog ammaan ah oo 60 mitir ah, UAV-na wuxuu ku duulay 160 mitir. Si loo hubiyo isku dhafka saqafka, waxaan sidoo kale kordhinay heerka isku dhafka. Heerka isku dhafka dhererka waa 85% heerka isdhaafsiga isdhaafsiga waa 80%, iyo UAV waxay ku duushay 9.8m/s xawaare.
Warbixinta hawada Triangulation (AT).
Adeegso software-ka “Sky-Scanner” (Waxa soo saaray Rainpoo) si aad u soo dejiso oo aad hore ugu sii habayso sawirradii asalka ahaa, ka dibna ugu soo dejiso ContextCapture 3D software qaabaynta hal fure.
Warbixinta qallooca muraayadda
Laga soo bilaabo jaantuska jaantuska, waxaa la arki karaa in qallooca lens ee RIY-DG4pros uu aad u yar yahay, wareegguna wuxuu ku dhow yahay gebi ahaanba inuu la mid yahay square caadiga ah;
Cilad diidmo RMS
Thanks to farsamada indhaha ee Roobka, waxaan ku xakameyn karnaa qiimaha RMS gudaha 0.55, taas oo ah halbeeg muhiim ah oo sax ah qaabka 3D.
Waxaa la arki karaa in masaafada u dhexeysa barta ugu weyn ee muraayadda tooska ah ee dhexe iyo barta ugu weyn ee muraayadaha indhaha ay yihiin: 1.63cm, 4.02cm, 4.68cm, 7.99cm, marka laga reebo farqiga booska dhabta ah, qiyamka qaladku waa: - 4.37cm, -1.98cm, -1.32cm, 1.99cm, farqiga ugu badan ee booska waa 4.37cm, isku-dubaridka kamaradaha waxaa lagu xakameyn karaa 5ms gudahood;
RMS ee la saadaaliyay iyo dhibcaha kontoroolka dhabta ah waxay u dhexeeyaan 0.12 ilaa 0.47 pixels.
3. qaabaynta 3D
Waxaan arki karnaa taas sababtoo ah RIY-DG4pros waxay isticmaashaa muraayadaha dhererka dhererka dheer, guriga ku yaal xagga hoose ee qaabka 3d waa mid aad u cad in la arko. Inta u dhexaysa wakhtiga ugu yar ee kamaradu waxay gaari kartaa 0.6s, markaa xitaa haddii heerka isdhaafsiga dhererka la kordhiyo ilaa 85%, ma jirto wax daadinta sawirka. Meelaha dhaadheer ee dhismayaasha dhaadheer ayaa ah kuwo aad u cad oo asal ahaan toosan, taas oo sidoo kale hubinaysa inaan heli karno raad sax ah oo sax ah qaabka dambe.
4. Hubinta saxda ah
Waxaan u isticmaalnaa wadarta saldhigga si aan u ururino xogta booska isbaarooyinka ka dibna aan u soo dejino faylka DAT CAD. Kadibna si toos ah u barbar dhig xogta booska dhibcaha ee moodeelka si aad u aragto kala duwanaanshahooda.
Imtixaankan, dhibku waa in hoos udhaca sare iyo hoose ee goobta, cufnaanta sare ee guriga iyo sagxada adag. Qodobbadani waxay u horseedi doonaan kororka dhibka duulimaadka , khatarta sare leh, iyo qaabka 3D ka sii xun, taas oo horseedi doonta hoos u dhaca saxnaanta sahanka cadastral.
Sababtoo ah dhererka focal ee RIY-DG4pros ayaa ka dheer kamaradaha caadiga ah, waxay hubisaa in UAV-geena ay ku duuli karto meel ammaan ah oo ku filan, iyo in xallinta sawirka walxaha dhulka ay u dhexeyso 2 cm. Isla mar ahaantaana, muraayada buuxa ee muraayadda ayaa naga caawin karta inaan qabno xaglo badan oo guryaha ah marka ay duulayaan meelaha dhismaha cufan ee sarreeya, sidaas darteed hagaajinta tayada qaabka 3D. Marka la eego dhismaha in dhammaan aaladaha qalabka lagu dammaanad qaado, waxaan sidoo kale hagaajineynaa isku dhafka duulimaadka iyo cufnaanta qaybinta dhibcaha xakamaynta si loo hubiyo saxnaanta qaabka 3D.
sawir-qaadista tooska ah ee meelaha sare ee sahaminta cadastral, hal mar sababtoo ah xaddidnaanta qalabka iyo khibrad la'aanta, kaliya waxaa lagu qiyaasi karaa hababka dhaqanka. Laakiin saameynta dhismayaasha dhaadheer ee calaamadda RTK waxay sidoo kale sababtaa dhibka iyo saxnaanta liidata ee cabbirka. Haddii aan u isticmaali karno UAV si aan u ururino xogta, saameynta calaamadaha dayax-gacmeedka ayaa si buuxda loo tirtiri karaa, iyo saxnaanta guud ee cabbirka si weyn ayaa loo hagaajin karaa. Markaa guusha imtixaanku waa mid muhiimad weyn inoo leh.
Tijaabadani waxay caddaynaysaa in RIY-DG4pros ay runtii xakamayn karaan RMS ilaa tiro yar oo qiimo ah, waxay leedahay saxnaanta qaabaynta 3D oo wanaagsan, waxaana loo isticmaali karaa mashaariicda cabbirka saxda ah ee dhismayaasha sare.
Waa maxay qaabka xogta ceyriinka ah?Sidee ayay tahay in aan uga shaqeeyo?
qaabka sawirada cayriin waa .jpg.
Caadi ahaan duulimaadka ka dib, marka hore waxaan u baahanahay inaan ka soo dejino kamarada, oo u baahan software-ka aan u qaabeynay "Sky-Scanner" , software-kan, waxaan ku soo dejisan karnaa xogta hal fure, oo si toos ah u soo saara ContextCapture block files sidoo kale.
Nala soo xidhiidh si aad wax badan uga ogaato sawirada cayriinka ah >
Habka rakibida ee dhufto ee kala duwan ha ahaato UAV garab go'an ama diyaarado yar?
RIY-DG4 PROS waxaa lagu dhejin karaa labada rotor-ka badan iyo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee loo yaqaan 'oblique data acquisition.iyo sababta oo ah unugga kantaroolka, unugga gudbinta xogta iyo nidaamyada kale ee hoos yimaada waa modular , markaa way fududahay in la rakibo oo la beddelo. Waxaan shaqeynaa oo leh shirkado badan oo aan duuliyaha lahayn oo adduunka oo dhan ah, labadaba garabka go'an iyo rotor-ka badan iyo VTOL iyo helikobter, waxaa soo baxday in dhammaantood si wanaagsan loo habeeyey.
Waa maxay sababta is-waafajinta shan-lens ay aad muhiim ugu tahay?
Dhammaanteen waan ognahay in inta lagu jiro duulimaadka diyaaradaha aan duuliyaha lahayn, signalka kicinta ayaa la siin doonaa shanta lenses ee kamarada indhaha. Aragti ahaan, shanta muraayadood waa in si isku mid ah loo soo bandhigo, ka dibna xogta POS waa la duubi doonaa isku mar.
Laakiin xaqiijinta dhabta ah ka dib, waxaan gaadhnay gabagabo: Markasta oo ay sii adkaato macluumaadka qoraalka goobta, way badanaysaa cadadka xogta ee muraayadu xalin karto, cadaadin karto, oo kaydin karto, iyo wakhti badan oo ay qaadanayso si loo dhamaystiro duubista.
Haddii inta u dhaxaysa calaamadaha kicinta ay ka gaaban yihiin wakhtiga loo baahan yahay muraayadda si loo dhamaystiro duubista, kamaradu ma awoodi doonto inay sameyso soo-gaadhista, taas oo keeni doonta "sawir maqan" .
BTW，ah Isku-dubarid sidoo kale aad ayey muhiim ugu tahay calaamadda PPK.
Waa maxay hufnaanta shaqo ee DG4Pros? Sideen u dejiyaa cabbirada khuseeya?
DJI M600Pro + DG4FAA'IIDOOYINKA
Joogitaanka duulimaadka (m)
Xawaaraha duulimaadka (m/s)
Meesha duulimaadka halliga ah (km2)
Lambarka sawirka duulimaadka ee halliga ah
Tirada duulimaadyada maalinlaha ah
Wadarta goobta shaqada hal maalin (km2)
※ Jadwalka cabbiraadda waxaa lagu xisaabiyay heerka isugaynta dheer ee 80% iyo heerka isdhaafsiga isdhaafsiga ee 70% (waxaan ku talinaynaa)
Diyaarad aan duuliye lahayn + DG4FAA'IIDOOYINKA
Soo daji xogta
Xogta asalka ah
Nala soo xidhiidh si aad u hesho furaha >
Fadlan na sii faahfaahintaada foomka hoose, raggayaguna waxay kula soo xidhiidhi doonaan dhawr maalmood oo shaqo gudahood.